9 Hukama Zvinangwa Vaviri Vakaroorana Vanofanira Kushuvira Kwa - Ukama
9 Hukama Zvinangwa Vaviri Vakaroorana Vanofanira Kushuvira Kwa
Hukama hwakasimba, hukama hwakanaka chinhu cherunako. Kunyangwe hukama chaihwo husingatombo fanirwa kuve hwakawandisa hwekurwa, kana iwe uripo kana kuti wakambove muhukama hwakakomba, hwakazvipira, iwe unozoziva kuti zvinosanganisira basa rakawanda.
Iko kumhanyisa kwekutanga kwemahormone uye kufara kunogona kuita sekunge kucharamba kuripo nekusingaperi, asi panosvika nguva apo murazvo unozotanga kufa kana ukasaziva kuisa mafuta pamoto.
Kune rimwe divi, ichokwadi kuti hapana hukama huviri hungazomboita hwakafanana. Mushure mezvose, munhu wese akasiyana uye ane zvakasiyana zvaanoda nezvaanoda.
Kune rimwe divi, nekuda kwekuti pfungwa yevanhu vaviri yekukwana inogona kunge isinganzwisisike kune vamwe vaviri, izvo hazvireve kuti hapana zvimwe zvibodzwa zvakajairika izvo isu tisingakwanise kuve nazvo zvese zvinangwa zvinoita kuti hukama huenderere mberi nekushanduka pane kumira.
Ndiri kutaura zvinangwa chaizvo zvibodzwa zvehukama zvinopfuura zvepamusoro. Zvinhu zvekushuvira sevaroorani vanoenda zvakadzika zvakadzama pane kungotora iyo yakanaka pikicha yekuisa kune Instagram ine chinyorwa #couplegoals.
Kunyangwe pasina chakaipa nekugovana rudo rwako pasocial media izvozvi uye zvakare, chikuru chinotarisana nehukama hwako hachifanirwe kuve yakanaka mifananidzo mikana.
Asi chii chinofanira kuve chikuru tarisiro?
Kana iwe uri wakakomba nezvekurera hukama hwako kupfuura chikamu chekutanga chehusiku , heano zvimwe zvibodzwa izvo izvo zviviri zvamungatarise kuzvimisikidza kuti zvive nechokwadi chekuti zvinoramba zvichikura uye kukura kwemakore anotevera.
1. Munova neHupenyu Kunze Kweumwe Neumwe
Iwe unoziva avo vakaroorana vanoita zvese zvese pamwe chete? Usave mumwe wavo!
Zviri nyore zvinoshamisa kuti upinde muhukama uye ukangoerekana waona mwedzi mishoma (kana makore!) Pasi pemutsara wekuti iwe hauna zvachose hupenyu hwakazvimiririra nemumwe wako.
Imwe yekiyi dzekusimbisa hukama hwako hwepamoyo ndeyekuti iwe usairege ichisundira hukama hwako nemhuri yako, shamwari dzako , uye kunyange iwe pachako kudivi. Kana ukadaro, unoisa panjodzi yekukanganisa hukama.
Kunyangwe zvingaite sezvisinganzwisisike kuti ndatanga iyi rondedzero nekukuudza iwe kuti funga nezvehumwe hukama hwako neako wega pane mumwe wako, zvakakosha kuti usangozvimirira wega pamunhu mumwe (kana inobvumirana pane imwe neimwe kana imi mose muchirega humwe hukama huchiwira munzira).
Hapana munhu mumwe anofanirwa kuve nemhosva yekufara kwako kwese zvinorema kutakura. Ndiro basa rako.
Kana iwe ukaisa kumanikidza kwakanyanya kune mumwe wako, zvinongokonzeresa matambudziko pasi petambo. Iwe unenge uine zvinhu zvinonakidza zvekutaura nezvazvo kana uchikwanisa kudzoka kune mumwe nemumwe mushure menguva paine nyaya dzekutaura uye nerutsva-rwakawanikwa ruzivo kupfuudza.
2. Asi Iwe Uchiri Kukoshesa Hukama Hwako
Wataura zvese izvo, nepo iwe usingatombofaniri kuremedza hukama hwako, zvinofanirwa zvichiri kukosha pamberi penyu mese .
murume anogona kuchinja here kumukadzi waanoda
Zviyeuchidze kuti usatore hukama for granted chero nguva, uye sarudzai nguva yekuti imi vaviri muve pamwe chete.
Tichifunga nezve kumhanya-mhanya kwakawanda kwehupenyu hwedu mazuva ano, kunyanya kana vana kana vamwe vanovimba vachikandwa mumusanganiswa, kana iwe ukasaronga munguva yemhando pamwe chete, pamwe haungazopedzisira wave nechero.
Chinangwa chekubatana nemumwe nemumwe zuva nezuva kune imwe kamwe. Tarisa zvakakwana kune mumwe nemumwe, kunyangwe kwemaminetsi gumi nemashanu chete pamusoro pekapu yetii, uye rongai nguva dzemazuva manheru kana mazuva apo iwe unogona kupedza maawa mashoma uchinyatsofara nekambani yeumwe.
Zvinogona kubatsira kuona hukama sechinhu chakaparadzaniswa icho chinonyatsoda chikafu. Moto, shure kwezvose, unopedzisira wadzima kana wapiswa kuburikidza nemafuta ese aripo. Nguva iri pamwe chete yakaenzana nekurova kana kukanda danda pamoto.
3. Munotandara Pamwe Chete
Ndinoziva, chirevo 'kushanda pahukama hwako' hachinyatsonzwika sekunakidzwa kwakawanda. Asi inofanira kuva!
Ita shuwa kuti pamwe nekuve ne hurukuro dzakakomba , muri kuitawo nguva yekutandara pamwe chete.
Funga kumashure kuzvinhu zvawakaita pamwechete pakutanga kwehukama hwako uye kurota zvinhu zvitsva zvaunogona kuyedza.
sei kuva munhu akasununguka zvakanyanya
Edza kusatora hupenyu zvakanyanya uye usatya kuve wakapusa uye kuzvibata sevana zvakare. Dzokorora ma-jokes ako uye tora Mickey kubva kune mumwe nemumwe. Nakidzwa nekushamwaridzana!
Hukama hwakakodzera haufanire kunge chiri chinhu chinokutadzisa kuita uye zvinoreva kuti unomira chinofanira kukuendesa kumberi.
Wakamboona imwe yeiyo kuputsika kana kurambana uko mumwe kana vaviri mapato vanoenda kunovandudza hupenyu hwavo? Iko kwavanopedzisira vaita zvinhu zvese zvavaigara vachirota nezvazvo, asi havana kumbonzwa kuti vanogona kuzviita vachiri muhukama.
Ivai vaviri vacho vanoita izvo zvinhu pamwe chete, vachimanikidzana uye kwete kugadzirisa zvemamiririri.
Iwe nemumwe wako munofanira kuita napose pamunogona napo kukurudzirana kuti muratidze zvinangwa zveupenyu hwenyu, zvingave zvehunyanzvi kana zvemunhu. Iva mumwe wako mukuru anokufadza uye uvayeuchidze kuti vanogona kuita chero chinhu chavanoisa pfungwa, uye vachakuitira zvakafanana.
Kudonha Murudo: Iwo Matanho gumi Auchapfuura Nawo
7 Misiyano yakakosha pakati peRuchiva Uye Rudo
Ko Rudo Rwechokwadi Chisarudzo Kana Kunzwa?
10 Zviratidzo Iwe Uri Wekusina Tariro Kudanana
13 Zvikonzero Nei Ndichikuda Iwe Kuti Zvidimbu
Ndeipi Nguva Yakakodzera Kuti Uti 'Ndinokuda' Mune Hukama?
5. Munosimudzirana Munofunga
Ipo iwe usingafanire kutora ruzivo rwehungwaru mune zvese zvakafanana zvinhu, iwe unofanirwa kuve nekufarira kwechokwadi mundangariro dzeumwe neumwe.
Mumwe wenyu angangoda kubuda kuenda kumuseum kana kuverenga bhuku rakanaka paSvondo masikati mumwe wacho anogona kunge ari wefirimu buff.
Asi, nepo zvakanaka kuva nezvido zvakasiyana, iwe unofanirwa kunge uchikwanisa kuita nhaurirano dzinoenda zvinopfuura zvepamusoro. Kunyangwe iwe uchikurukura tsika, zvematongerwo enyika, kana kunyangwe chirevo chehupenyu, iwe unofanirwa kufarira kufarira kudzika mukati mepfungwa dzeumwe.
Kana iwe uchifunga kuti izvi zviri kushayikwa muhukama hwako, edza kudzima TV pano neapo, uchipfuura hurukuro diki, uye uchivabvunza nezvehunhu, vatorwa, bonde, chitendero, nyeredzi, kusachengeteka kwavo…
Paunochera zvakadzika mukati mepfungwa yemunhu waunoda, iwe unowana pfuma yakavigwa.
Kune ruzhinji rwevanhu, bonde chikamu chakakosha chehukama hwepamoyo. Pakupera kwezuva, isu tese mhuka dzine dhiraivha yepabonde.
Izvo zvakare zvakajairika, zvisinei, kuti bonde muhukama hwakareba huve kushomeka zvishoma uye kuti mapato ese arasikirwe nechido, kunyanya kana hupenyu hukabatikana uye uchinetsa.
Izvo zvinodiwa pano kutsunga kuita kuti zvinhu zvifambe. Sezvo iwe uchifanira kuisa makadhi ako patafura pamusoro pezvaunoda mune zvimwe zvikamu zvehukama, hurukuro pamusoro pepabonde dzinofanirwa kuve dzakajeka, dzakavhurika, uye dzisina nyadzi.
Iwe unofanirwa kunzwa wakasununguka zvakakwana nemumwe wako kuti mukwanise kutaurirana zvamunoda uye nekuvabvunza nezve avo (nepo kuremekedza miganhu yemumwe nemumwe nguva dzose).
Kana iwe ukaisa kuedza mukati kuti uchengetedze moto uchipisa uye uchida kuedza zvinhu zvitsva, hapana chikonzero nei bonde risingakwanise kuramba richiwedzera kuve nani sezvo ruzivo rwako rwemiviri yemumwe nemumwe uye zvishuwo zvichidzika pamusoro pemakore.
7. Iwe Unoisa Makadhi Ako Ese Patafura
Kutendeseka ingangove ndiyo yakanyanya kunaka mutemo. Hukama hwakanaka haufanire kunge hwakavakirwa pazvinhu zvamunofungidzira kuti zviri zviviri 'zvinorehwa' mukutaridzika kana nenzira yaunotaura chimwe chinhu.
Kunyangwe hurukuro pamusoro pehukama ichi chingave chinonyengera kutaurirana, kana imi mese mukasangana nazvo nechinangwa chekujekesa zvinhu pakati penyu, hurukuro dzakadai dzinowanzove dzakanaka nekusimbisa chisungo chenyu.
Kunyangwe iri hurukuro nezve iro ramangwana ratidziro yehukama kana kutaura kwechakavanzika chishuwo chekutamira kune imwe nyika, zvako nezvinotarisirwa nemumwe wako zvinofanirwa kutsanangurwa kudzivirira kusagadzikana.
kunzwa sei kusurukirwa ndisina shamwari
8. Uri Chikwata
Kana iwe uri mukati hukama hwakazvipira , iwe unofanirwa kuona mumwe wako semubati wechikwata. Kana iwe uchigovana imba kana uine vana kana zvipfuyo pamwechete, iwe unofanirwa kugona kuvimba kune mumwe nemumwe.
Ipo ngano dzisingataure chikamu ichi, iko kwechokwadi kwekugara kunoreva kuti imi mese munofanira kutamba chikamu chenyu kuchengetedza show mumugwagwa.
Dzimwe nguva, mumwe wenyu anozoda mumwe wacho kuti atore huremu zvishoma, asi zvinofanirwa kudzoreredzwa nguva dzose. Kana iwe uchida imwe rutsigiro, iwe unofanirwa kukwanisa kuikumbira, asi iwe unofanirwa kugara uchingove unodisa kudzorera mutsa.
Kana iwe uri nhengo yechikwata, iwe unogara uine mumwe nemumwe musana uye unoziva panowanikwa kuvimbika kwako.
9. Pamusoro pazvose, Unogara Une Mutsa
Zvinogona kuve nyore kuzviwana iwe kupopotera mumwe wako . Kangani iwe wakatyora uye ukataura zvinhu zvausingareve chaizvo kana iwe uchinzwa kukuvadzwa nechinhu chavakaita kana chavasina kuita?
Zvinogona kuve zvinoyedza uye zviri nyore kwazvo kurega chimwe chinhu chinotyisa chichitsvedza, asi kana iwe uchinzwa muyedzo wekubuda kunze, chengeta icho mukati. Passive hutsinye hunhu , kubiridzira, uye kutaura kwekutsvinya kwaunoziva kucharova kumba hazvizombobatsira chero mamiriro ezvinhu.
Vanozongo shandira kufambisa wedge pakati pako uye zvingangoreva kuti mumwe wako anotanga kuisa anozvidzivirira madziro kuzorwa newe, asingade kukuvadzwa zvakare.
Haungagare uchibvumirana - uye izvo zvakajairika uye zvine hutano - asi zviite pekutanga kugadzirisa chero kusawirirana zvakananga, nekukurumidza, uye zvakadzikama, uchigara wakabata chinangwa mumoyo mako chekusakuvadza mumwe wako nechero mazwi akaomeswa.
Iwe unovaziva kwazvo zvekuti unoziva kurova kwavanorwadziwa, asi nekuzvipira kwauri, ivo vari kuvimba newe kuti usashandise ruzivo irworwo kuvapikisa.
Iva nemutsa uye ude nemoyo wako wese, uye hauzopfuure zvakanyanya kutadza.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi kuti ndezvipi zvinangwa zvekuisa muhukama hwako? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
Iri peji rine zvakabatana zvinongedzo. Ini ndinogamuchira diki Commission kana iwe ukasarudza kutenga chero chinhu mushure mekudzvanya pavari.
Sei Uye Papi Kuti Ubvumirane Muukama Hwako (+ Kana Usingaite)
Maitiro Ekurega Kudzivirirwa: Nyore 6-Nhanho Maitiro
Maitiro Ekutarisana Nekunetseka Kwemanzwiro Nevamwe
Akanakisa Ekuzvibatsira-Mabhuku e2021 (Yangu Yega Wishlist)
11 Zvikonzero Nei Usinga Regedze Kufunga Kwake (+ Sei Kuti)
Maitiro Ekuita Nekuzvikudza Shamwari / Hama (+ Nei Vanhu Vachizvikudza)
Tsika Dzinotyisa Dzinoratidza Kufunganya Kwemumwe Munhu Nekunetseka
Kana Iwe Usina Kushuvira Kune Chero Chinhu, Verenga Izvi
Maitiro Ekupindura Kana Iwe Ukaona Kuti Mumwe Munhu Akanyepa Kwauri
Tsamba Kumurume Wangu Wemberi
16 Signs Iwe Chaizvoizvo Unoita SeMukomana: Ungaita Sei Kuti Uve Nechokwadi Nezvekunzwa Kwako
Maitiro Ekunyorera Iyo Yakakwana Rudo Tsamba Kuti Ita Wako Partner Kuchema
kupedza sei hukama hwakareba
murume wako paanoenda kune mumwe mukadzi
nzira dzekuita kuti mumwe munhu anzwe zvirinani
kunzwa sekunge iwe usinga zowana rudo
mafaro mazano ekuita kana uchinetseka